Deegaan carruurta ku dhalata ay ku dhashaan xaalad timo la’aan ah. | HimiloNetwork
Posted by: Himilo in Sahanka July 3, 2021	0 97 Views
MUQDISHO (HN) — Xaalad dhif iyo naadir ah ayay la dhiban yihiin dadka deggan tuulada “Al-Keif” ee ka tirsan gobolka Kirkuk ee dhacda waqooyiga dalka Ciraaq. Inta badan carruurta deegaankan ayaa ku dhasha timo la’aan muddo sannado ah, iyadoo aan la ogeyn sababta.
Waxay ka soo muuqataa carruurta bidaarta laga soo bilaabo dhalashadooda, Tani waa midda ku kaliftay dhallinyaro badan inay ka caga jiidaan guurka guursiga sannadihii la soo dhaafay. Iyaga oo ka cabsi qaba in ay dhalaan carruur aan timo laheyn.
Kaddib markii ifafaalaha arrintan ay si xawli ah oo dhaqso leh u kordhayeen 20 sanno ee la soo dhaafay.
Dadka deegaanka ayaa rumeysan in biyaha wasaqeysan ee laga cabbo tuulada ay ka dambeyso arrintan. Laakin mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa Al-jazeera u xaqiijiyay in kiisaskii ugu horreeya ee cudurkan ay soo if baxeen siddeetamaadkii qarnigii la soo dhaafay, balse sababta ugu badan ay tahay hiddo ama dhaxal, mana ahan sababo la xariira biyaha wasakheysan ee la cabbo.
Mohamed Qadar Abdi.
Previous: Maalinta Caalamiga ee Iskaashatooyinka.
Next: Xanuun la-yaab leh ayaa sanka ka hayay muddo 37 sano ah.